Archive du 20180502
Lozam-pifamoivoizana teny amin’ny RN4 1 maty, 5 naratra mafy
Fiara kely marika Nissan no tra-doza tany amin’ny lalàm-pirenena faha-4 mihazo an’i Mahajanga iny omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 2 ora.
Marc Ramiaranjatovo Miantso ireo ben`ny tanàna hanatevin-daharana ny tolona
Mihamafy ny hetsika eny amin`ny Kianjan`ny 13 mey, toy izany ihany koa ireo fanentanana maro samihafa. Hetsi-bahoaka ny tolona ataon`ireo depiote ho an`ny fanovana fa tsy fanonganam-panjakana, hoy ny lahateny nifandimby.
Praiminisitra Solonandrasana Diso 0 iray
Niteraka resabe indray omaly ny fanehoan-kevitry ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier momba ny fampiakarana 8% ny karaman’ny mpiasam-panjakana eto amintsika, araka ny fanambaran’ny filoham-pirenena ny takarivan’ny alatsinainy 30 aprily teo.
Antenimierandoholona Raikitra ny fifamaliana
Nisokatra omaly talata 1 mey ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin`ny lapa maitson`Anosikely. Nanaitra ny maro ny fifamaliana nisy teo amin`ny filohan`ny Antenimierandoholona sy ny loholona Paul Bert teo amin`ny fanokafana ny fivoriana.
Antenimieram-pirenena Tsimbazaza Tsy nahatratra 30 akory ny depiote nivory omaly
Nosokafan’ny filohan’ny Antenimeram-pirenena Malagasy am-perinasa, Rakotomamonjy Jean Max, omaly talata 1 mey ny fivoriana ara-potoana voalohany fanaon’ity rafitra mpanao lalàna ity.
Depiote ho an’ny Fanovana “Miala ny filoha, izahay tsy hivory intsony…”
“Tsy laharampahamehana intsony ny fanatrehana ny fivoriana ara-potoana eny Tsimbazaza amin`izao satria tsy laharampahamehana eo amin`ny vahoaka nifidy anay ny fandaharam-potoana hivoriana any”,
Hetsi-bahoaka ho an’ny fanovana Sarotra ho an’ny HVM ny hampangiana azy
Tsy mandaitra intsony ny vono afon’ny fanjakana eo anatrehan’ny zava-misy. Miha matanjaka ny herim-panoherana mitaky ny hialan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Fifidianana filoham-pirenena 2018 Tsy mety amin’ny firaisankinam-pirenena, hoy i Faly Ramakavelo
Tsy maintsy atao ny fanovana tanteraka ny lalàmpanorenana eto Madagasikara, hoy ny mpahay toekarena sy fiarahamonina, Faly Ramakavelo, raha nanazava ny fahitany ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Paolo Raholinarivo sy Rabetsara Lita “Tsy nandray vola tamin’ny fanjakana izany izahay”
Nivoaka tamin’ny fahanginana ihany koa Atoa Paolo Raholinarivo, mpanolotsaina ny praiminisitra sy Rabetsara Lita, mpiaro ny zon’ny mpanjifa manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
FANONDROTAN-KARAMA VONOAFO ?
Nasondrotra hoe ny karama, karamanareo fanjakana ? Misento mandre an`izany ireo olona ambany tanàna ! Tsy ory hava-manana akory fa toa mahatsinjo sahady `Zay ho sondro-bidy atsy ho atsy sy ny olana mbola hianjady.
Misaona ny asa fanaovan-gazety Nodimandry i Juliana Andriambelo
Nodimandry omaly talata 1 mey teo amin’ny faha-60 taonany Ramatoa Juliana Faralalao Andriambelo, tale jeneralin’ny orinasan-gazety Midi Madagasikara.
Karama nasondrotra 8% Kajy politika efa tara loatra
May volon-tratra ny mpitondra manoloana ny zava-misy, hany ka mandray fanapahan-kevitra maimaika mba hamonoana ny afo. Hasondrotra 8% manomboka amin’ity volana mey ity ny karaman’ny mpiasam-panjakana, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny alatsinainy 30 aprily teo.
Tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara Hitarafana ny tsy fandrosoana
Raha misy firenena tena tsy manara-dalàna dia anisany i Madagasikara. Miainga hatrany amin’ny fitondrana mihitsy izany ary tonga eny amin’ny isam-batan’olona izay entina.
Tsena vaovao ao Moramanga Tadiavin’ny fanjakana omena tantanan’ny vahiny, nitroatra ny VOT
Taorian’ny fahavitan’ilay tsena lehibe ao Moramanga hahafahan’ireo vahoaka any an-toerana mivarotra ara-dalàna dia fantatra izao fa tadiavin’ny fitondram-panjakana omena tantanana vahiny izany.
Fanelanelanana ataon’ny FFKM Mbola mikatso aloha hatreto
Tsy mbola nisy ny hevitra nivoaka avy amin’ny fanelanelanana nataon’ny FFKM teo amin’ireo depiote manohana sy ny manohitra ny fitondrana.
Champions League Hiatrika famaranana indray ny Real Madrid
Nampangitakitaka ny lalao manasa-dalan’ny champions league halina; nisaraka ady sahala 2 no 2 ny Bayern Munich sy ny Real Madrid..tafiakatra amin’ny lalao famaranana fanintelony misesy, indray izany ny ekipan-dry Ronaldo .
Andrasana hanaja tena
Inona intsony moa izany no maha filoham-pirenena na maha praiminisitra sy izay rehetra mitantana ity firenena ity ?
Women in business Nifampizara traikefa ireo vehivavy mpandraharaha
Tontosa omaly tetsy amin’ny Ibis Akorondrano ny tontolo andron’ireo mpandraharaha vehivavy izay nosalorana ny anarana hoe WIB na Women in business.
Vehivavy mpandraharaha Malagasy Hotohanan’ny minisiteran’ny varotra
Ny vehivavy mpandraharaha Malagasy no fantatra fa anisan’ny mavitrika indrindra sady manana ezaka goavana raha oharina amin’ireo vehivavy mpandraharaha mitovy aminy any amin’ny firenen-kafa.
Sendikan’ny mpampianatra malagasy Manohana ny hetsika ataon’ny depiote
« Hanova ny tantara ny SEMPAMA mba tsy iharany intsony ». Teny efa nolazain’ny SEMPAMA io, roa taona lasa izay ary mbola entiny hanohanana ny hetsika ataon’ny solombavambahoaka manoloana izao olana ara-politika misy eto Madagasikara izao.
Rija Ramanantoanina Hiavaka indrindra ny seho amin’ny alahady
Fotoana iray miavaka indrindra hatramin’izay 30 taona niantseharan’i Rija Ramanantoanina teo amin’ny tontolon’ny hira sy mozika izay no hitranga etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady 6 mey izao.
Hetsiky ny faran’ny herinandro Saika nangingina avokoa
Asa na variana amin’ny olana politika mitranga eto amin’ny firenena ny maro fa saika vitsivitsy olona hatrany ny seho ara-kolontsaina sy ara-barotra tamin’iny faran’ny herinandro iny.
FANAFIHANA TENY ANKADINDRAMAMY
Lasan’ny jiolahy ny vola izay tao anaty « caisse » tetsy Ankadindramamy. Ireny toerana fandraisam-bola amin’ny alalan’ny finday ireny no notafihan’ny efa-dahy vao maraina omaly.
FANGALANA IREO MPIASAM-PANJAKANA
Fahombiazana tanteraka ny famoahana ireo mpiasan`ny ministeram-panjakana sy orinasa maro ny alatsinainy lasa teo.
Lasan’ny jiolahy ny vola izay tao anaty « caisse » tetsy Ankadindramamy.